ဆရာစံ (မြောက်/အရှေ့)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ အတွင်းလမ်းကျယ်​ဖြစ်သော အရှေ့မြိ...
Phone No. To Contact
Ad Number S-10162669
ဗဟန်း တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်လမ်းသွယ် မြေညီထပ် အမြန်ရောင်းမည်။
Ad Number S-10166429
Ad Number S-10157308
ဗဟန်း #အင်ကြင်းမြိုင်အိမ်ယာရှိ အိပ်ခန်း(၃)ခန်းပါသော (၅)လွှာတိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိသည်။
Ad Number S-10156198
ေရႊတိဂံုဘုရားအေ႐ွ႕ဘက္မုဘ္နဲ႔နီးေသာ တိုက္ခန္း အျမန္ေရာင္းမည္
Ad Number S-10138895
Ad Number S-10135403
Phone No. To Contact PSK Phyu Sin Kyal Myanmar Co., Ltd.
Ad Number S-10133671
PSK Phyu Sin Kyal Myanmar Co., Ltd. Close
ဗဟန်း ဦးချစ်မောင်လမ်းဒဲ့ပေါက်မှ ပထမထပ် တိုက်ခန်း အရောင်း
Ad Number S-10131388
Phone No. To Contact Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd.
Ad Number S-10129826